Horumarinta Istaraatiijiyadda Xalka Waara oo laga shiray – Radio Muqdisho
Xafiiska Xalka Waare ee Wasaaradda Qorshaynta Qaranka ayaa qaban qaabiyay kulan isugu yimaadeen inta badan hay’adaha ka shaqeeya barnaamijyada xalka waara, ee Soomaaliya iyo daneeyayaasha taageera Soomaaliya.
Kullanka waxaa daahfuray Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Mudane Jamaal Maxamed Xasan oo ay wehliso Agaasimaha Kormeerka iyo Qiimeynta ahna Agaasimaha Xalka-Waara, Marwo Zahra Cabdi Maxamed.
Marwo Zahra Cabdi ayaa shirka ka jeedisay xog kooban oo ku saabsan Istaratijiyadda Qaran ee Xalka Waara (2020-2024).
Intii uu socday shirka waxaa looga hadlay:
1. Dar-dargalinta arrimaha hortabinta u leh dedaalada loogu jiro in xal waara loo helo barakaca baahsan ee dalka.
2. Qorshe hawleedka ee xalka waara kuna salaysan Istaratijiyada Xalka Waara ee loo sameeyey maamul goboleedyada Dowladda Federalka.
3. Isku xirka shaqooyinka xalka waara ee hay’adaha iyo wasaaradaha Dowladda Federalka.
4. Dardargelinta hirgelinta Istaratijiyada Xalka Waara.
R/W Rooble oo markale la kulmay Madaxweynaha Isutagga Imaaraadka